‘Niyad-jab Ayaan La Seexan Kari Waayey’ – Gattuso Oo Ka Hadlay Niyad-jabkii Uu Ka Qaaday Ciyaartii Benevento | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
‘Niyad-jab Ayaan La Seexan Kari Waayey’ – Gattuso Oo Ka Hadlay Niyad-jabkii Uu Ka Qaaday Ciyaartii Benevento
Published on December 5, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(05-12-2017) Tababare Gennaro Gattuso ayaa ka hadlay barbar-dhacii guul-darrada ka liitay ee kooxdiisa AC Milan kala kulantay Benevento oo ku jirta kaalinta ugu hoosaysa ee horyaalka, isla markaana dhibicdii ugu horreysay ka heshay kulankii Milan.
Gattuso oo la hadlay Milan Tv, waxa uu sheegay in maalintii ay dhacday ciyaarta Benevento aanu habeenkii oo dhan seexanin niyadjab darteed, isla markaana uu dhawr jeer dib u daawaday ciyaarta.
“Habeenkii oo dhan maan seexanin, waanan niyad-jabsanaa. Marba dib ayaan u daawanayey ciyaarta, kaddibna waxbaan ka diyaarinayey. Qof kasta wuu ka cadhooday natiijjada, waayo si fiican umaanaan ciyaarin, laakiin waxaan ka helay niyadda ciyaartoygayga. Waa in aanu si ka wanaagsan sidan u ciyaarno oo aanu horumar samayno, si habboonna u shaqayno.” sidaas ayuu yidhi Gattuso.
Gattuso waxa uu sheegay in ciyaartii Benevento ay uga dhignayd ama ula mid ahayd ciyaartii quarter-finalka Champions League ay Bayern Munich goolka barbar-dhaca ah kaga dhalisay daqiiqaddii 92aad, taas oo ka dhacday garoonka San Siro.
Waxa uu carrabka ku adkeeyey in ciyaarta dambe ay nidaam ka duwan kii hore la iman doonaan, waxaanu hoosta ka xariiqay in labada ciyaartoy ee Kalinic iyo Jack ay si fiican u ciyaareen goolalna dhaliyeen, halka Kessie uu dhexda ka maamulayey ciyaarta.
Lama filaanka ku dhacay ayuu ku sababeeyey inay ahayd kooxdiisa oo dallanayd, daqiiqadihii dambe ee ciyaartana isdhiibtay.
Jamaahiirta Manchester United oo dalbaday in Ganaax adag lasaaro Pep Guardiola?
(22-2-2018) Jamaahiirta kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa aaminasan in Pep Guardiola uu u qalmo ganaax kadib ...
Kumaa loo doortay Man of the match kulankii Sevilla iyo Manchester United?
(22-2-2018) Kadib markii ay dhamaatay cayaartii Xiisaha badanayd ee Xalay dhe martay kooxaha Sevilla iyo Manchester United ayuaa ...
Jose Mourinho oo ka yaabsaday Wariye Su aal ka weydiiyey qaab cayaareedkii McTominay kulankii Sevilla kadib!+Sawiro
(22-2-2018) Macalinka kooxda Kubada cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa ka yaabiyey Wariye u shaqeeya BT Sports oo ...
Daawo Goos Gooska iyo Sawirada Real Madrid oo soo degtay kaalinta 3 aad Horyaalka La Liga
(22-2-2018) Kooxda Kubada Cagta Real Madrid ayaa Guul ka Gaartay kulankii horay ugu baaqday ee Horyaalka dalka Spain ...
Daawo Goos Gooska iyo Sawirada David de Gea oo bad baadiyey Manchester United
(22-2-2018) Kooxda kubada Cagta Manchester United ee dalka England ayaa ka bad baaday Guuladro ay kala kulmi lahayd ...
James Rodriguez Iyo Pepe Oo Dib Ugu Midoobay Alianz Arena
(21-2-2018) Kulankii xalayto dhex maray kooxaha Besiktas iyo Bayern Munich ayaa wuxuu kulmiyay ciyaartooy horay kaga soo wada ...
Daawo: Liverpool oo Maanta sixun u Garaacday Manchester United
(21-2-208) Kooxda Kubada cagta Liverpool ayaa Guul ka gaartay kulan xiiso badnaa oo ay Galabta ladheeleen Naadiga ay ...
Paul Pogba oo laxaqiijiyey in uu Kursiga keydka ku soo bilaaban doono Kulanka Sevilla
(21-2-208) Wararkii ugu danbeeyey ee laga helay Kooda Manchester United ayaa sheegaya in Cayaaryahanka dalka France ee Paul ...
Thierry Henry Oo Fariin U Diray Laacibka Ugu Qaalisan Kubada Cagta?
(21-2-2018) Hadii xidigii hore ee Barcelona Neymar uu caasimada France ugu guuray in uu ka baxo hooska Lionel ...
Wiil uu dhalay Didier Drogba oo heshiis lagaaray kooxda?
(21-2-2018) Cayaaryahan da.yar oo uu dhalay Weeraryahankii hore ee kooxda kubada Cagta Chelsea Didier Drogba'ayaa lasheegayaa in uu ...
Zinedine Zidane Oo Ronaldo Ka Saaray Xidigaha Wajihi Doona Leganes
(21-2-2018) Tabababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qorsheynaya in uu nasiyo ciyaariyahan Cristiano Ronaldo kulanka caawa ay ...